မန္တလေးတိုင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့မှာ မွတ်စလင်မ်များ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရ။ လူ(၂၀၀)ကျော်သေဆုံးသွားပြီလို့လဲသိရပါတယ်။
ခရစ်ယာန်သီလရှင်တွေဟာ တစ်ကိုယ်လုံး ဖုံးအုပ်ထားကြတယ်ဆိုရင် အာလုံးက လေးစားကြတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ မူစလင်အမျိုးသမီးတွေ အဲဒီလို ဖုံးအုပ်ဝတ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေကို မတရားဖိနှိပ်ထားတယ်လို့ နာမည်ဖျက်ကြတယ်၊ ယဟူဒီတို့ ဆစ်ခ်ဘာသာဝင်တို့် မုတ်ဆိတ်အရှည် ထားကြတယ်ဆိုရင် မိမိအမျိုးဘာသာကို ထိန်းသိမ်းတယ်လို့ ပြောကြတယ် မူစလင်တွေ မုတ်ဆိတ်ထားတာကိုကျတော့ အယူသီးတယ်လို့ ပြောကြတယ် အိမ်ထဲမှာပဲနေပီး သားသမီးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ အမျိုးသမီးကို အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်းလို့ ချီးမွမ်းကြတယ် ဒါပေမဲ့ မူစလင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အဲဒီလို တာဝန်ကျေပွန်တယ်ဆိုရင် နံရံလေးဘက်အတွင်းမှာ အကျဉ်းချခြင်းခံထားရတယ် သူတို့အတွက် လူ့အခွင့်အရေး ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြတယ် ဘာသာရေးပညာမှာ ထူးချွန်တဲ့ ကလေးတွေကို အောင်မြင်တဲ့ ပညာရေးလို့ အားပေးကြတယ် ဒါပေမဲ့ မူစလင်ခလေးငယ်က ဘာသာရေးပညာမှာ ထူးချွန်တယ်ဆိုရင် အကျိုးမဲ့ပညာရေးလို့ သမုတ်ကြတယ် ယဟူဒီ၊ခရစ်ယာန်တို့က အပြစ်မဲ့လူတွေကို သတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့တွဲပြီး အပြစ်မဖော်ပြကြပါ အကယ်လို့ မူစလင်တစ်ယောက်က ပြစ်မှုတစ်ခုနဲ့ အဖမ်းခံရတယ်ဆိုရင် ဘာသာနဲ့တွဲဖော်ပြပီး အစ္စလာမ်မ်ကိုပါ နာမည်ဖျက်ကြတယ် မိန်းခလေးတိုင်း ဘယ်လိုအ၀တ်အစားပဲမဆို ၀တ်စားပြီး တက္ကသိုယ်ကောလိပ်ကျောင်းကိုသွားနိုင်တယ် မူစလင်မိန်းခလေးတစ်ယောက် လုံခြုံအောင်ဝတ်ပြီး တက္ကသိုယ်ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် ဂိတ်ပေါက်မှာတင် တားမြစ်ခံရပါတယ် လူအများအသက်ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ဖို့ မိမိအသက်ကိုရင်းပီး စွန့်စားသူကို သူရဲကောင်းလို့ ဂုဏ်ပြုကြတယ် ပါလက်စတိုင်းခလေးငယ်တွေ အသက်ခံရမှာ ကို ကာကွယ်ဖို့ မိမိညီအစ်ကိုများ မတရားအသတ်ခံရမှာကို ကာကွယ်ဖို့ မိမိရဲ့ မိခင်၊ညီမတွေကို မတရားစော်ကားခံရမှာကို ကာကွယ်ဖို့ မိမိအိမ်များ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှာကို ကာကွယ်ဖို့ မိမိဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ ဖျက်ဆီးခံရမှာကို ကာကွယ်ဖို့ မိမိအသက်ကို ရင်းပီး စွန့်စားတိုက်ခိုကသူကို အကြမ်းဖက်သမားလို့ သမုတ်ကြတယ် ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲရဲ့ စကားကို နာခံတတ်ကြတယ် အဲဒီလိုမျိုး အစ္စလာမ်မှာ တွေ့ရင်ငြင်းဆန်ကြတယ်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်က စည်းကမ်းမဲ့ ကားမောင်းရင် အဲဒီလောက်အပြစ်မကြီးပါ ဒါပေမဲ့ မူစလင်တွေ စည်းကမ်းမဲ့ပြုလုပ်ကြရင် အစ္စလာမ်ကို ကြီးလေးတဲ့တရားခံလို့ သတ်မှတ်ကြတယ် သတင်းစာနဲ့ မီဒီယာမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တထစ်ချယုံကြည်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ ကုရ်အာန်မှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာများအပေါ် စောဒကတက်ကြတယ် အဲဒီလို တဖက်သက် အနှိမ်ခံနေရသော်လည်း ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက် ပြန့်ပွားနေတဲ့ သာသနာဟာ အစ္စလာမ်သာသနာပဲဖြစ်ပါတယ်
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 10:15 No comments:
ရိုဟင်ဂျာသည်ဘင်္ဂါလီမဟုတ် မြန်မာ့မြေပုံအတွင်းမှ တိုင်းရင်းသားအစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။
ပထ၀ီရှုထောင့်၊ သမိုင်းအမြင်နှင့်ကြည့်ရှုလေ့လာလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်ဟု
ဆိုသော်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အရှေ့ဘက် နယ်စပ်ပြည်နယ်များနှင့် နယ်ချင်းထိစပ်နေသော ပြည်နယ်
တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် အာရိယန်တို့ အခြေစိုက်နေထိုင်ရာ အိန္ဒိယပိုင်သည့် ဘင်္ဂလား နယ်ရှိ
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးနှင့် မျိုးနွယ်တူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကာလများကတည်းကပင် အစ္စလာမ်ဘာသာ သည်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အမြစ်တွယ်၊ ပျံ့နှံနေပြီဖြစ်သည်။
သမိုင်းကြောင်းရဆိုလျှင် အေဒီ(၇၈၈)ခုနှစ်လောက်မတိုင်မီကတည်းကပင် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ အစ္စ
လာမ်ဘာသာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး၊ လူအများစုမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်
ကတည်းကပင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာသည် အရေးပါသည့်အခန်းမှရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
(၁၄၃၀ခုမှ-၁၆၃၈) ခုနှစ်အတွင်း နှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ကျော်တိုင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မွတ်စလင်မ်ဘုရင်များ
ထီးနန်းစိုးစံခဲ့သည်။ ၁၄ရာစု ၁၅ရာစုတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် သီးခြားလွတ်လပ်သော
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 08:57 No comments:
ပြင်းပြင်းထန်ထန် လူသတ်မှုကို အားပေးနေသော အစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်ဆိုးတွေကို ပြည်သူများသိစေရန်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 21:54 No comments:
Labels: Burma Muslim VDO
မင်္ဂလာဇေယျုံရပ်ကွက်ရှိ ဟေမာယသွလ်အစ္စလာမ် အရဗီကျောင်းမှ အာလင်မ်တန်း ကျောင်းသား ဟာဖီးဇ် မိုဟမ္မဒ် အိဟ်သိရှာမ်း (ဘ) ဟဇရသ် မောင်ဝ်လာနာ ဟာဖီးဇ် နူးရွလ်ဟာက် အပါအ၀င် ကျောင်းသား (၂၈)ယောက် ရှဟီဒီ ဖြစ်ပါကြောင်း...
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 21:09 No comments:
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 20:45 No comments:
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 20:32 No comments:
လူတွေဟာ သူတို့ကြိုက်ရာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ် ပြုမူနိုင်ပြီး လူတို့လုပ်သမျှ တာဝန်ယူနိုင်ကြတယ်ဆိုရင် ဒါဟာဒီမိုကရေစီ ကျင့်ဝတ်တွေ ရှိနေပြီလို့ပြေားနိုင်ပါပြီ။
ဒီမိုကရေစီမှာ မတူကွဲးပြားမှုတွေရှိကြပါတယ်။ လူတဦးနဲ့တစ်ဦး၊ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုတခု၊ လုပ်ငန်းသဘာဝ တခုနဲ့တခုတို့ ဟာ မတူပဲ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မတူပေမယ့်လည်း လေးစားရပါတယ်။ ဖျက်ဆီးပိတ်ပင်တာတွေမလုပ်ပဲ ထိန်းသိမ်းပေးရပါ တယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့စနစ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရပါတယ်။ ဒါဟာသာမန်အားဖြင့် ရှိနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စိတ်ဓါတ်ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို ဆောင်ရွက်ကြရာမှာ ဒီစိတ်ဓါတ်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အခြေခံတခု ရှိနေပါမယ်။ အဲဒီအခြေခံကတော့ ဒီမိုကရေစီကျင့်ဝတ်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုတာ အပြုအမူတွေပါဘဲ။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 21:07 No comments:
လူတိုင်းဟာ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို ၀တ်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် အများသူငှာကို ထိုက်စေခြင်းမရှိဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာ ပါတီပွဲသွားရင်ဝတ်တဲ့အ၀တ်အစားကို တရားပွဲတွေသွားတဲ့အခါမ၀တ် သင့်ဘူး။ ဒါမျိုးကိုရှောင်ကျင်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ဒါကို ကိုယ်ကဘာဖြစ်လဲ ဒီမိုကရေစီအရ ၀တ်စားဆင်ယင်ခွင့်ရှိတယ်လိုပြေား လို့မရပါဘူး။အဲလိုဝတ်ဆင်သွားယင် အများစုအနှောက်အရှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် မိမိဖက်ကနေရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ ၀တ်စားဆင်ယင်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာ သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာနဲ့ အပ်စက်တဲ့အ၀တ်အစား၊ အများသူငှာအစိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်စေမယ့်အ၀တ်အစားမျိုးကို အထူးရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါတယ်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 21:01 No comments:
ကမ္ဘာ့လူသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အလိုငှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် ထုန်ပြန်ကြေညာပြီး ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်းနိုင်ငံများက အတည်ပြုလက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကြေညာစာတမ်းကြီးကို သဘေားတူလက်ခံကျင့်သုံးပါမည်ဟု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သေား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအတွင် မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ၁၀.၁၂.၁၉၄၈ ရက်နေ့မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူအခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းကို အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တယ်။သို့သော်လည်း လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတိုင်မှာ အဘယ်ကြောင့်ထို ကြေညာစာတမ်း အပိုက်(၃၀)အားမသိရှိကြပါသနည်း။ လူတိုင်းသည် အောက်ပါကြေညာစာတမ်း တွင်ပါရှိသေား စာပိုဒ်များကို တစ်ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖော်မည်ဆိုပါကအလွန်အကျိုးထူးကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံဖြိုးမှုသည်လည်း လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:30 No comments:
၊ငြိမ်းချမ်းရေးစကားတစ်ခွန်းလောက်ပြေားဖို့အတွက် ၀န်လေးနေတဲ့ ဒီလိုအဆိုးရတွေက တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်နေရာမျာသုံးစားလို့ရမှာလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
အခုတလေားမှာခေတ်စားနေတာက (၉၆၉)ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားများအဖွဲ့ပါ။ ထိုအဖွဲ့ကို ရက်သမားများနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကဖွဲ့စည်းထားတာပါ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမှန်သမျှ မြန်မာ့မြေပေါ်မှအပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားရေပင်ဖြစ်ပါသည်။ အခုလက်ရှိတွင်ဆောင်ရွက်နေသေားအချက်များမှာ ကုလားဆိုင်ဈေးမ၀ယ်ရ၊ ကုလားနှင့်စကားမပြေားရ၊ ကုလားများနှင့်မဆက်သွယ်ရလို့လိုက်လံစည်းရုံးလှုံဆော်နေပါတယ်။(၉၆၉)ဆိုပြီးအမည်တပ်ပြီး အကြမ်းဖက်သမားများအုပ်စုဟာ ရရင်ရသလို လစ်ရင်လစ်သလို မွတ်စလင်မ်တွေအပေါ်မှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေခြင်းကို မည်သည့်အစိုးရ၊ မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမှ ၀င်ရောက်မတားဆီးတဲ့အပြင် တစ်ချို့အဖွဲ့အစည်းများက နောက်ကွယ်ကနေ ပံပိုးကူညီနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:45 No comments:
၂၀၁၃၊ မေလ၊ ၉ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မဟီဓော တက္ကသိုလ်မှာ ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို ရခိုင်အမျိုးသားများ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့်-၊ ရိုဟင်ဂျာများကိုတော့ ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေပွဲမှာတော့ ကိုကျော်သောင်းက ဦးဆောင်ကျင်းတဲ့ သူဖြစ်ပြီး ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များစွာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို ဖိတ်ကြားထားခြင်းမရှိတဲ့ ဧည့်သည်တော် မြန်မာမွတ်ဆလင် တန်းတူညီမျှ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ သမိုင်းသုတေသနပညာရှင်ကိုဌေးလွင်ဦးမှ အခမ်းအနာသို့တက်ရောက် ဆွေးနွေးလိုကြောင်း
ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ အစည်းအဝေဆုံးဖြတ်ချက်အရ သမိုင်းသုတေသနပညာရှင် ကိုဌေးလွင်ဦးအပါအ၀င် ရိုဟင်ဂျာသုံးဦးလည်းတက်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:43 No comments:
ပထမကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်မ်တွေကို ပညာရေးနိမ့်ကျတယ်၊ အသိတရားအားနည်တယ်လိုထင်နေတာ၊ အမှန်တယ်တော့ ကျွန်တော်သေချာလေ့လာကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ရိုးသားပွင့်လင်းပြီ အမှန်တရားအပေါ်ရပ်တည်နိုင်ကြတဲ့သူတွေ၊ သူများရိုင်ပြတာကို သဘေားထားကြီးစွာပြန်ဖြေရှင်းတဲ့သူတွေ၊ မိုင်းရိုင်တဲ့သူတွေကို ပြန်မရိုင်ပဲ အစ္စလာမ်အရှိတရားတွေကို လက်တွေ့ကော့မက်ပြန်ပေးနေတဲ့သူတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်တော်တော်သဘေားကျတယ် လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်၊ မွတ်စလင်မ်တွေဟာအခုလို နေထိုင်ဖို့ အစ္စလာမ်သာသနာကပြထမ်းထားပြီးသားပါ၊
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:39 No comments:
အစ္စလာမ်ဇာတိမာန် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှ လူများစုဖြစ်လာသည်မဟုတ် အင်္ဂလိပ်အဆိုးရမအုပ်ချုပ်ခင်အချိန်အရင်ကထဲးက အင်အားကြီးမားသော လူဦးရေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသား ရာနဲ့ချီပြီး တစ်မျိုးစီ စီတန်းလိုက်ရင် ငါတို့မြန်မာမွတ်စလင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယလူဦးရေပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။
မြန်မာအဆိုးရသည် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု တစ်စုအတွင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကျံတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကို လိုက်လံထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုရင် ငါတို့သည် အမိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေကို အဘယ်ကြောင့်မထိန်သိမ်းဘဲရှိနေသနည်း။ငါတို့သည် အဖဘက်မှသော်၎င်း အမိဘက်မှသော်၎င်း အမိအဖနှစ်ပါးစလုံးဘက်မှသော်၎င်း တိုင်းရင်းသားများအမှန်စဉ်စစ် ဖြစ်ခဲ့ကြသည် ကို ခေတ်အဆက်ဆက်က မြန်မာသမိုင်းပညာရှင်းများမသိလေသလေား။ သို့မဟုတ် မသိကျိုးကျွန်ပြုခဲ့လေသလေား၊ အီကဲ့သို့ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း ဆိုသည်ကိုငါတို့စဉ်းစားကြရပေမည်။ငါတို့၏ ဘိုးဘေဘီဘင် မြန်မာများသည် အစ္စလာမ်သာသနာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိအစ္စလာမ် သာသနာကိုတည်တံခိုင်မြဲးအောင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိခေတ်သမ္မရတွင် မြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသားများသည် ကုရ်သာအင်္ကျိအရှည်များဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ဗလီဦးထုတ်ဆောင်းခြင်း၊ မုတ်ဆိတ်ထားခြင်း စသည်တို့သည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ဟုပြေားဆိုနေကြသည်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:37 No comments:
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 12:17 No comments:
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်တော် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ခင်ဗျာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြသနာဟူသမျှကို မြန်မာနိုင်ရဲ့ သမ္မတစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့သမ္မကြီးဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် သိလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
သမ္မကြီးခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ ရှေးဘုရင်များခေတ်အဆက်ဆက်မှ နအဖအဆိုးရ အုပ်ချုပ်သေား ကာလတခုအထိ မည်သည့်ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာမှမရှိ ခဲ့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်သမျှ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားချစ်ခင်စွာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တဦးကိုတဦး မည်သည့်အသွေးအရောင်မှမခွဲးခြားဘဲ ညီအရင်း အစ်ကို မောင်အရင်းနှမများသဖွယ် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုနေထိုင်လာခဲ့ကြတာ အခုသမ္မတကြီးလက် ထက်ကျမှ ပြသနာပေါင်းစုံ ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကို မတရားစစ်တိုက်ပြီး တုန်ပြန်ခဲ့တာတွေ၊ ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းမှာ သံဃာတော်တွေကိုရက်ရက် စက်စက်မီးလောင်ဗုံးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေ၊ သာကေတမြို့နယ်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ကလေးများစာသင်ကျောင်းကို မတရားဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတာတွေ၊မအူပင်မှာ လယ်သမားအခွင့်အရေးတောင်ဆိုနေတဲ့ လယ်သမားတွေကို မတရားတဲ့ နည်းနဲ့ ကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားခဲ့တာတွေ၊ လှိုင်သာယာမှာ မွတ်စလင်အ်ိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေအား လုံးကိုသမ္မတကြီးမသိပါသလေား။သမ္မတကြီးမှာ တာဝန်မရှိပါသလေား၊ ဒီကိစ္စတွေအတွက် သမ္မတကြီးမှာ ဘားမှဖြေရှင်းမှု မရှိပါသလေား။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 11:03 No comments:
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာမှီတင်းနေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ မာနစွဲ၊ အတ္တစွဲ၊ ဒီအစွဲးတွေဖယ်ရှားပြီးတစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကာကွယ်စောင့်လျှောက်နိုင်ကြပါစေ လူသားမှန်သမျှ လူသားအချင်းချင်းကို မည်သည့်အသွေးအရောင်မှ မခွဲးခြားဘဲ ချစ်ခင် ရင်နှီးစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဗျာ
လူဆိုတာ ဘာသာတရားကိုးကွယ်တဲ့သူရှိသလို မကိုးကွယ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသလိုလေး စားလိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့သူလဲရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို လေးစားစွာဆက်ဆံပေးဖို့ လက်ခံပေးဖို့အတွက် သာသနာ တစ်ခုကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့ လိုသလား၊ ဘာသာရေးရှိမှ ဆက်ဆံမယ် ဘာသာတူမှဆက်ဆံမယ်လို့သတ်မှတ် လို့ရသလား ဘာသာမဲ့လူတန်းစားကိုကော ဆက်ဆံလို့မရဘူးလား။ လူတစ်ယောက်လို့ လက်ခံဖို့၊ အသိအမှတ်ပြုဖို့ ဆိုရာတွင် ဘာသာ တစ်ခုနှင့် နောက်တစ်ခု တူညီမှရမယ်တဲ့လား။လူတိုင်းဟာ မိမိဘာသာရေးအပေါ်မှာ လေးစားချစ်ခင်သလောက် တစ်ပါးသူ တွေကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာဆိုရင် အမြဲတမ်းမကောင်းထင်တက်ကြတယ်။ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ ဘယ်ကစဖြစ်တာ လဲ၊ အိုကေ ဒီအဆင့်အထိသဘေားပေါက်ရင် ဆက်သွားကြည့်မယ်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 11:01 No comments:
တစ်ခုတော့ပြေားစရာရှိတာက ဟိုးတုန်းက ရခိုင်ပြည်နဲ့ စစ်တကောင်းနယ်ကိုနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အောင် နယ်မြေတစ်ခုတည်း အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ဘင်္ဂါလီစကားပြေားတက်ခြင်း၊ ဘင်္ဂါလီအသွင်မျိုးတွေရှိနေခြင်းမှာ ရခိုင်ပြည်ဖွား အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ မြန်မာမွတ်စလင်တွေအတွက် အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းထက်ပိုပြီး ဘင်္ဂါလီလုံးလုံးမဟုတ်သည်ကို သမိုင်းသုတေသီများက အခိုင်အမာပြေားခဲ့ပြီးပြီဆိုတာ လူကြီးမင်းတို့သိရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့်မြန်မာမွတ်စလင်မ် ဌာနေဇာတိလူရင်းများကို မြန်မာမွတ်စလင်မ်တစ်မျိုးတည်း ခေါ်ဝေါ်ကြပါရန် ယနေ့မှစရ်ျတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်သည်။
လူတွေကလည်းတော်တော်ခတ်တယ်ဗျ မွတ်စလင်ဆိုရင်ဘင်္ဂါလီလိုထင်နေကြတယ် ကျွန်တော်တို့ ဘင်္ဂါလီဆိုရင် ဘင်္ဂါလီလို့ဂုဏ်ယူပြီးပြေားလိုက်ချင်ပါတယ်။ တကယ်ဘင်္ဂါလီမဟုတ်လို့ မဟုတ်ဘူးလို့ပြေားတော့လည်း စိတ်ဆိုးပြန်တယ်။ ဘင်္ဂလာဒေရ်ှက လူဦးရေသန်းပေါင်း(၂၂၀)ရှိတဲ့နိုင်ငံဗျ ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလာလီခံယူလိုက်ရင်တော်တော်ရှုပ်ကုန်မယ်နော်၊ သေချာစဉ်းစားပြီးမှပြေားကြပါ။ ကျွန်တော်တို့က အခုလက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်အပေါ်ဘာအန္တရာယ်မှ မပေးပဲ သစ္စာရှိစွာနေထိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို နိုင်ငံတော်က မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေ အားလုံးဟာ ဘင်္ဂါလီတွေပါလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုရင် မြန်မာ့မြေပုံပျာက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 22:53 No comments:
ရွှေရိုးအက တီထွင်ခဲ့သူ မြန်မာမွတ်စလင် ကာတွန်းပညာရှင် ဦးဘကလေး
ဦးဘကလေးဆိုတဲ့ ရွှေတလေး အကြောင်းကို သိရှိဖတ်ရှုခဲ့ရပြီးနောက် အခြားလူငယ်တွေကိုလည်း သူ့ အကြောင်းတွေ သိစေချင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း စာစောင်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဦးဘကလေးအကြောင်းကို ရေးသားတာ မတွေ့ရ တော့ တတ်နိုင်သလောက် လေ့လာဖတ်ရှု မေးမြန်းပြီး ဦးဘကေလေးအကြောင်း အနည်းငယ်ကိုရေးသားလိုက်ခြင်းပါ။
ကာတွန်းဆရာကြီး ရွှေတလေး၊ ရုပ်ရှင်လူရွှင်တော်ကြီး ဦးရွှေရိုးဆိုတာ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း(၈၀)ကျော် (၁၀၀) အတွင်းက မြန်မာစာနယ်ဇင်းတွေနဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ မြန်မာ(တိုင်းရင်းသားအစ္စလာမ်သာသနာဝင်) အနုပညာသည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 21:51 No comments:
Labels: ဗမာမွတ်စလင် သမိုင်း
ဘာသာတရားတွေကိုသေချာလေ့လာပါက အစွဲကင်းစွာလေ့လာပါမှ အမှန်တရားကိုသိမြင်မည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဘာသာတရားမျာကိုဝေဖန်ပြေားဆိုနေသူများအနေဖြင့်လည်း တရားလမ်းမှန်ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် အသားငါးစားသောက်ခြင်းကို အသတ်သတ်တယ်လိုယူစပြေားဆိုနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာ သက်ဝင်ယုံကြည်သူများကို အကြံပြုလိုတာက ဒီနေ့မှစရ်ျ အသတ်သတ်ခြင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာကခွင့်မပြုထားသည်အတွက် အသားငါးစားသောက်ခြင်းကိုလျှောင်ကျဉ်ကြပါရန် လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ အကယ်ရ်ျ အသားငါးများစားသောက်ချင်ပါက ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကိုစွန်လွှတ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာအဖြစ်လက်ခံလိုက်ပါက လူကြီးမင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသေားလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်ကို တင်ပြအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစ္စလာမ်က အသား ငါး စားသသောက်ခြင်းကို လူသား၏ အစာအဟာရအဖြစ် လိုအပ်သလောက်စားသုံးရန် ခွင့်ပြုထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးတရားသဘေားကိုဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ လူရဲ့အသိ၊ လူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်သည် တခါတစ်ရံတွင် ဘာသာတရားများနှင့်ဆန်ကျင်ဖက်ဖြစ်တက်သည်ကိုအထူသတိပြုစေချင်ပါသည်။
အခုတစ်လော ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ရေးနေကြတာက မွတ်စလင်တွေ နွားတွေသတ်၊ ကျွဲတွေသတ်၊ ဆိတ်တွေသတ်တယ်လို့ စွတ်ဆွဲပြေားဆိုနေတာတွေ၊ ဝေဖန်နေကြတာတွေရှိလာတာတွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒါကလည်းတကယ်တမ်းပြေားရရင် သဘာဝကျတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ သို့သော် ဒီလိုမေးတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် မနက်ကဘာဟင်းနဲပထမ်းစားခဲ့သလဲးဆိုတာမေးပါရစေ၊ တကယ်တော့နာမည်ကြီးထမင်းငတ်ဆိုတဲသဘေားပါဘဲ မွတ်စလင်တွေဟာ သူများအသတ် သတ်ပါတယ်လို့နာမည်ကြီးနေဗေမယ့် တကယ်တမ်းကြတော့ သူတို့စားဖို့သတ်ပေးနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ လူတိုင်ဟာ သူများကိုပြေားရမယ်၊ သူများကိုဝေဖန်ရမယ်ဆိုတာ သိကြဗေမယ့် ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာမသိတာတော်တော်ခတ်ပါတယ်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 21:44 No comments:
သတင်းလိမ်၊သတင်းမှားတွေကိုအမြဲတမ်းပေးနေတဲ့တက်ထူးလွင်တင်တဲ့ပိုစ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် ကျွန်တော်သေချာစုံစမ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဓါတ်ပုံဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေထဲးကသိတဲ့သူတွေတောင်ပါနေ တယ်ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသတင်းလိမ်ပေးနေတဲ့တက်ထူးလွင်ရဲ့အမှား၊ကလိမ်ကကျစ် ညာဏ်ကို ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးဖို့ တာဝန်ရှိလာပါတော့တယ်။ တက်ထူးလွင်ရဲ့ဝဘ်ဆိုက်ကိုလေ့လာနေတာကြာပါပြီမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေရေးထားတာတွေက တအားများနေတယ် ဒါဗေမယ့် ကျွန်တော်မသိတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ မသိသလိုဘဲနေလိုက်တာပါ။ အခုတော့ အများပြည်သူကို သူကို လေ့လာဖို့ သူ့ဝဘ်ဆိုက်လင့်ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တက်ထူးလွင်အနေနဲ့လည်း ဘယ်အရာမဆို လိမ်စဉ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ပီပြင်မှလုပ်ပါ မပြီပြင်ပဲလုပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်အနေနဲ့ လက်ပိုက်ကြည်နေမှာမဟုတ်ဘူး၊အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားပေးတာတွေကိုရှောင် ပါ။ဒီပုံကိုလေ့လာပါတခြမ်းပဲ့ဗလီကနေဒလဘက်ကဗလီတစ်လုံးကိုသွားဖို့သင်္ဘေားစီးရန်ထွက်လာပြီ
နောက်ကျံ ခဲ့တဲ့သူတိုအဖွဲ့သားတွေကို စောင့်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်
ပါ။ ရေတောင်မရေားပါဘူး။အမှန်တကယ် ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘင်္ဂါလီပါလို့တက်ထူးလွင်သိရင် ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားပြီး ဖမ်းထားလိုက်မှာပါ ပြီးမှသူရဲ့ဝဘ်ဆိုက်ထဲးထည့်ပြီး ခိုးဝင်လာသောဘင်္ဂါလီများဟုကြေငြာမှာမလွဲမသွေပါပဲ။ လူကြီးမင်းတို့ယုံလိုက်ပါ ဒါဟာတက်ထူးလွင်ရဲ့အမှန်တကယ်လိမ်စဉ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သက်သေခံပါတယ် မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက်ထူးလွင်ရှင်းခြင်းတဲ့နေရာမှာရှင်းနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေနေမှာ ဘင်္ဂါလီမပြေားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အခုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတောင် စစ်ထွေအထိတောင်မှ လာဖို့မပေးပဲ အပြင်းအထန်တားဆီးပိတ်ပင်နေကြပါတယ်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 03:12 No comments:
စာအုပ်မှာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးသံအမတ်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ သမိုင်းသုတေသီ မိုရှေးယေဂရ်က ၄င်း၏ မဟာဝိဇ္ဖာဘွဲ့ ဟီဗရူးတက္ကသိုလ် သို့ တင်သွင်းခဲ့သည် “The Muslim of Burma” ကျမ်းကို စာရေးဆရာ ဝါးခယ်မ မောင်မင်းနိုင်မှ ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ muslim from myanmar land
Muslim From Myanmar Land by Mmedia_Doc
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 01:42 No comments:
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 01:37 No comments:
Bo Aung San 1972009 Burma
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 11:00 No comments:
where is ko mya aye
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 10:53 No comments:
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 10:41 No comments:
8888 's memories
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 10:11 No comments:
8-8-8-8 uprising in Burma part 1
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:57 No comments:
5 September 2010 - Nay Zaw Naing
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:40 No comments:
DVB - 19.12.2010 - Nay Zaw Naing
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:35 No comments:
Nay Zaw Naing ဆွဲဖွင့်မိသေားတံခါးများ။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 07:29 No comments:
သာကေတ က မူဆလင် ကျောင်းတခုကို ဖျက်လိုက်တာဟာ အများသဘောအရ ဆိုပြီးလုပ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အများသဘောတူ ဆန္ဒအရ မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ဥပဒေအရ တရားဝင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မရှိပဲ စေတီ ဆောက်ထားတဲ့ ချင်းတောင်တန်း နဲ့ ကချင်တောင်တန်း တွေက စေတီတွေ တခုမှ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒူဝါကချင်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
အောင်ဆန်းတို့အမေ ဗဟိန်းတို့အမေ အောင်ကျော်တို့အမေ။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 23:09 No comments:
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 22:50 No comments:
ရမ္မာဝတီမြို့ဝန်၊ ရွှေတောင် သာဂသူ ဘွဲ့ရ ဂန္ထ၀င်မြောက် စာဆိုတော် ဆရာကြီး ဦးနု by Lwin Ko Ko Oo
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 12:14 No comments:
ဒီနေ့ (၁၇. ၂. ၂၀၁၂) တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အန်ကယ် ဋ္ဌေးလွင်ဦးက မလေးရှားရဲ့ MMAM ရဲ့ ရုံးခန်းမှာ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
တစ်ချို့ကို အထောက်အထားများ၊ စာအုပ် စာပေများထဲမှ သက်သေခံနေသော အမှန်တရားများကို အခြေခံကာ အချက်ကျကျ ရှင်းလင်း
သူပြောပြတဲ့ အထဲမှာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ လူမျိုးရေး ကိစ္စတွေ၊
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဘယ်ကလာကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများသည် ရခိုင်ဒေသမှာ ရှေးယခင်ကပင် နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကြောင်း၊
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘင်္ဂါလီ မတူညီဘဲ ကွာခြားကြောင်း၊ ပါဠိစာပေအကြောင်း အနည်းငယ်၊ ကိုယ့်အမျိုးကိုယ် ချစ်စိတ်ထက်
တကယ်တမ်းကျတော့ နိုင်ငံချစ်စိတ်က ဘယ်လိုအရေးပါကြောင်း စသဖြင့် အကြောင်းအရာ ကွင်းဆက်မိမိ ဆွေးနွေးသွားတာကို
အချိန်က နေ့လည် ၂နာရီခွဲမှာ စတင်ရတာ ဖြစ်လို့ ပရိသတ် မပျင်းရအောင် စိတ်ဝင်တစား ပြောပြနေရင်းက အလျဉ်းသင့်သလို
တစ်ချို့နေရာလေးတွေမှာ အရွှန်းဖောက်ပြီး သမိုင်းကို မပျင်းအောင် ပြောပြသွားတာ တကယ့်ကို လေးစားစရာပါ။ နားထောင်ရင်းမှ
ပရိသတ်များကလည်း လက်ခုပ်သံနဲ့ မကြာ မကြာ ဂုဏ်ပြုကာ တစ်နာရီကျော် အချိန်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အန်ကယ့်အနေနဲ့ သူတင်ပြဆွေးနွေးမယ့် အပိုင်းကို အချိန်အများကြီး မယူဘဲ အမေးအဖြေကဏ္ဍကို အချိန်ပိုပေးပြီး
ဆွေးနွေးချင်တာကြောင့် အမေးအဖြေ အစီအစဉ် ထပ်မံ ရောက်ရှိလို့ လာပါတယ်။
၁။ ရိုဟင်ဂျာရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
၂။ ဒေါက်တာအေးချမ်းနဲ့ စိန်ခေါ်ထားတာ ဘယ်အဆင့် ရောက်နေပါသလဲ?
၃။ အခုလက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး (ဒေါက်တာအေးမောင်) ပြုတ်ဖို့ ကျတော်တို့ဘက်ကနေ signature တွေလိုက်ကောက်ပြီး
၄။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဘာကွာသလဲ?
၅။ ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ ဗမာလူမျိုး ဘာကြောင့် စာပေရော ယဉ်ကျေးမှုပါ တော်တော်ခပ်ဆင်ဆင်တူနေတာလဲ?
၆။ မြန်မာ မွတ်စလင်မ်တွေ အနေနဲ့ ဘာသာခြားတွေကြားမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အကောင်းဆုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်သင့်လဲ?
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 11:24 No comments:
လေးစားအပ်တဲ့မွတ်စလင်မ် ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ အလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ကရုဏာတော် ကျရောက်ပါစေ၊ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့အတူမွတ်စလင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ပူဆွေးသောကရောက်နေကျလိမ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။သီးခံမျိုသိပ်ကြပါအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်
အစားပေးတော်မူပါစေ၊ လေားကကမ္ဘာကိုပိုင်းစိုးတော်မူသောအရှင်သည် ဒီအတိုင်းကြည့်နေမည်မဟုတ်ပါ။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 10:32 No comments:
မနက်ထဲကအလွန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသလို ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်ဟာ ညနေငါးနာရီလောက်မှာတော့ စိတ်ညစ်စရာသတင်းဆိုးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီစိတ်နဲ့ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းတောင်မသိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်တွေညစ်လာတယ် ဒေါးသတွေထွက်လာ
နောက်ဆုံးတော့လည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်ကနေ ဖြေသိပ်ပေးမှုကိုခံယူရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါးသတွေပြန်ပြေသွားခဲ့တယ်။ စိတ်ကနေသာထိုင်သာပြန်ရသွားတယ်၊ သူငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကို ဖြောင်ချက်ပေးတယ် သူငယ်ချင်းတဲ့...............
ခွေးတွေကမင်းကိုကိုက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီခွေးကိုမင်းဒေါးသထွက်မှာဘဲ မင်းဒေါးသထွက်လို့ မင်းအဲဒီခွေးကိုပြန်ကိုက်မလားတဲ့၊ ဟုတ်တယ် ခွေးတွေကိုက်ရင် အဲဒီခွေးတွေကို ကျွန်တော်ဘယ်ပြန်ကိုက်မလဲး။ ကျွန်တော်က ခွေးနဲ့ပြိုင်ကိုက်ရင် ကျွန်တော်ပါအဆင့်မရှိရာရောက်သွာမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီလိုအကြံပြုပေးတဲ့သူငယ်ချင်းကို ဒီဖေစ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြေားလိုက်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာညီနောင်မွတ်စလင်မ်တွေ တစ်ခုဘဲသတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုတယ်။ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ဘာကိုမှမလုပ်မိပါစေနဲ့၊ တကယ်လို့ကိုယ်က စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်မိတဲ့အခါ ပြနာကအာဏာပိုင်တွေဖန်တီးတဲ့ဆက်ဝိုင်းထဲးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဖန်တီထားတဲ့အကွက်ထဲးရောက်သွားရင် မွတ်စလင်မ်ထုတစ်ရပ်လုံးနစ်နာဆုံးရှုံးရလိမ်မယ်။အဲဒါကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးစဉ်းစားပါ
ဒီအချိန်မှာဗလီကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖျက်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ဗလီကိုမီးနဲ့ရှုံမယ်ဆိုရင်လည်း ရှုံခိုင်းလိုက်ပါ၊ လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပါစေ ကိုယ်ဘက်ကဘာပြသနာမှမလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ်ဘက်ကနေပြန်ခုခံလို့ သူတိုဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်လာသည်နှင့်အမျှ ပြသနာဟာပိုကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြသနာကြီးထွားလာခြင်းဟာ အဆိုးရအာဏာရှင်လူယုတ်မာတွေကို အားပေးထောက်ခံရာရောက်တယ်။ ကိုယ်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ သူတို့ကဘာဖြစ်ခြင်တာလဲ ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်။ သွေးမစူကြပါနဲ့ စိတ်အေးအေးထားကြပါ အလ္လာဟ်ထံမှာဒိုအာတောင်းကြပါ။ အလ္လာဟ်အရှင်သဘေားတော်ရှိပါက မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံး နေရာအနှံ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များချီးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ မျှတတဲ့တရားလမ်းစဉ်တွေကိုနှလုံးမူပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသောပြသနာများအပေါ်ရှု့မြင်သုံးသပ်ပါ။
ဒါတွေအားလုံးကိုတော့မှတ်ထားလိုက်ပါ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါ၊ နောက်ဆုံးတော့ မကောင်းကြံဘေးဓါဏ်ထိဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ရှုးကိုယ်ပြန်ပတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်ကိုပြသနာမရှာရဲးတဲ့အဆိုးရဟာ မွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာဘဲ ပြသနာကတ၀ဲးလည်လည်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကတော့ရှင်းနေတာဘဲ တရုပ်ကသူလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုထိတာနဲ့ အဆိုးရရဲ့အပုတ်ကိုဖော်လိုက်မှာလေ အဲဒီတော့တရုတ်နဲ့တော့ အရှုပ်တော်ပုံမလုပ်ရဲးဘူးလေ၊
အဲဒီအတွက်မွတ်စလင်တွေကိုပဲဆက်တိုက် ဆက်တိုက်လုပ်သွားမှာပါ။ အရင်ထဲးကကျွန်တော်ပြေားပြီးပါပြီ၊ နောက်ဆုံးတော့သတင်းမီဒီယာတွေက သူတို့ရဲ့သမိုင်းဖော်မယ့်သူတွေဘဲ။ ကမ္ဘာကသိပါတယ် သမိုင်းဆိုးကြီးတစ်ခုကို လက်ရက်ခေါ်နေတဲ့အဆိုးရမှာ ဘားကိုမှကြောက်ရွံမှုတွေမရှိသေပါဘူး၊ ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘေားပေါက်ခြင်းဖြင့် မွတ်စလင်ညီနောင်များအနေဖြင့် မည်သည့်တုန့်ပြန်မှုကိုမှအလုပ်ကြပါရန် အနူရ်းညွှန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
Sami Yusuf - You Came To Me (Feat. Dato' Siti Nurhaliza) @SamiYusuf @Arteffec
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 09:18 No comments:
Labels: Islamic Song
ဗလီကို ချစ်သူများ၏ နေ.တနေ. / မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၃) “မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၃)”
“မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၃)” ကို မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၃) အဖြစ် ဆက်လက်ဖော်ပြပါတော.မည်။
Muslims and the program of Mosque Tour Guide - Part 23
ယခုအပါတ်တွင်မြန်မာပြည်အလည်ပြန်ခရီး- ၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ.မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် - ၉ ရက်အကြာ မြို.ကြီး ၅ မြို.ခရီးစဉ်၌ ၂၈.၀၁.၂၀၁၃ တွင် မန္တလေးမြို.မှာ ဗလီ ချစ်သူများ၏နေ. နေ.တနေ. အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထိုက်ဖွယ်ရာ ခေတ္တ အလည်သွားရောက်နိုင်ခဲ့ဖွယ် အကြောင်းကို ဖော်ပြပါမည်။
မြို.ခံ ဦးလေးသားချင်းများဆီမှာ တစ်ညအိပ်ပြီးမနက် သူ.သမီးနှင်.သားတို.ရဲ. မန္တလေးတခွင် ဘယ်လိုက်ပို.ပေးရမလဲမေးစဉ် ဗလီဧည်.လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလုပ်အားပေးပီသစွာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်သမိုင်း အထောက်အထားခိုင်မာ ဗလီများဆီ အမှတ်တရ လည်ချင်ပါသည် တောင်းဆိုခဲ့၍ အလ္လာဟ်အရှင်သဘောတူညီမှုဖြင့် ရောက်ခဲ့သမျှ ဤမှတ်တမ်းပြုခဲ့နိုင်ပါပြီ။
တည်းအိမ်မှာ မနက်စာ မန်းလေးစားဖွယ်ရာစုံ စားသောက်အပြီး ဦးစွာ မေမေဘက်မှ အဒေါ်များ၊ ညီမဝမ်းကွဲများနှင်. မျိုးဆက်သစ် တူ/တူမများထံခေတ္တသာစုံတွေ.နိုင်ခဲ့သော်လည်း အနားရှိ မန္တလေးမြို.၏ ကျောက်ဗလီ ရှေ. လိုက်ပို.ကား ခဏရပ်ထားခိုင်းပြီး ဝင်လည်ကြည့်ဖြစ်စဉ်က မှတ်တမ်းပုံများပါ။
ဗလီကြီးရှေ. အမှတ်တရနှင်. ဗလီအတွင်းဝင်းထဲက မှတ်တမ်းပုံများပါ။
ကျောက်ဗလီက အထွက် လမ်းတွင် ဖြတ်သန်းခဲ့စဉ် ရှေးလက်ရာ မိုနာရာစင်ဖြင်. ပေါ်လွင်လှပနေသော ဗလီတစ်လုံး၏ အပြင်ရှု.ခင်း၊ အတွင်း အမြင်များဖြင်. ပကတိ မန်းလေးသားမွတ်စလင်မ်တို.ဘဝ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုရာဌာန၏ မှတ်တမ်းတချို.ပါ။
မန်းလေးမြို. ပန်းသေး (တရုတ်မြန်မာမွတ်စလင်မ်) ဗလီကြီးဆီ အလည်ရောက်ခဲ့စဉ် မှတ်တမ်းများ
၁၈၆၈ ခုနှစ် (တနည်း) ပြီးခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၄၅ နှစ်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ.သော မြန်မာမွတ်စလင်မ် သမိုင်းဝင် ပန်းသေးဗလီကြီး ကျောက်စာ နှင်. အမှတ်တရ ကျွန်တော်တို. ဇနီးမောင်နှံ။
ဤခရီးစဉ်အစအဆုံး ကြည်ဖြူစွာ လိုက်ပါပို.ဆောင်ပေးခဲ.သူ ညီမ၊ မောင်လေးတို.နှင်. အတူ ပီတိဖြစ်နေသူ မလေးရှားခေတ္တရောက် အမတို. အမှတ်တရ။
မှတ်ချက်။ ကျန်ရှိပုံများကို မကြာမီ တင်ဆက်ပေးပါဦးမည်၊ ဗလီချစ်သူများ၏ နေ.တနေ.ကို အများသူငှာတို.လည်း အလားတူ ရကြပါစေ။
ဤသမိုင်းဝင် ရှေး မန်းလေးဗလီကြီးများသို. ဗလီချစ်သူများ၏ နေ.တစ်နေ. ဟု ဆိုစမှတ်ပြုလောက်အောင် အလည်ပတ်ပြုလေ.လာခဲ့ခြင်းအား
“မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၃)” ခေါင်းစဉ်အနေဖြင့် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများတင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 06:51 No comments:
Muslims and the program of Mosque Tour Guide - Part 22
ယခုအပါတ်တွင်မြန်မာပြည်အလည်ပြန်ခရီး- ၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ.မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် - ၉ ရက်အကြာ မြို.ကြီး ၅ မြို.ခရီးစဉ်၌ မန္တလေးမြို.မှ စစ်ကိုင်းမြို.သို.အသွား လမ်းခရီးတစ်ထောက်ဖြစ်သည့် ဦ့းပိန်တံတားကြီးရှိရာ တောင်သမံအင်း ပတ်လည်လမ်းမကြီးမှ ကားဖြင့်ဝင်ကာ အမရပူရ ရပ်ကွက်များသို.ဖြတ်လျက် လင်းဇင်ကုန်းကဘာန်စတန်ဝင်းသို. သွားရောက်ခဲ.ကြသည်ကို ဖော်ပြပါမည်။
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 06:42 No comments:
Find more photos like this on MMSY
၂၀၁၃၊ မေလ၊ ၉ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မဟီဓော တက္ကသိုလ်မှာ ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတ စ်ရပ်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆေ...
အခုတလေားမှာခေတ်စားနေတာက (၉၆၉)ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားများအဖွဲ့ပါ။ ထိုအဖွဲ့ကို ရက်သမားများနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကဖွဲ့စည်းထားတာ ပါ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်...
မြန်မာအဆိုးရသည် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု တစ်စုအတွင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကျံတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို လိုက်လံထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုရင် ငါတို့သည် အ...
လူဆိုသည်မှာ လူဆိုတာ ဘာသာတရားကိုးကွယ်တဲ့သူရှိသလို မကိုးကွယ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသလိုလေး စားလိုက်နာခြင်းမရှိတဲ...
ဒီနေ့ (၁၇. ၂. ၂၀၁၂) တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အန်ကယ် ဋ္ဌေးလွင်ဦးက မလေးရှားရဲ့ MMAM ရဲ့ ရုံးခန်းမှာ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် တစ်ချို့ကို အထောက်အထားများ၊ ...
လူတွေဟာ သူတို့ကြိုက်ရာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ် ပြုမူနိုင်ပြီးလူတို့လုပ်သမျှ တာဝန်ယူနိုင်ကြတယ်ဆိုရင် ဒါဟာဒီမိုကရေစီ ကျင့်ဝတ်တွေ ရှိနြေ...
AUNG KYAW MOE FACEBOOK
Edin Oo Yin သို့ဝင်ရန်
HTML CODE ယူရန်
The Voice of Rhhingyas
http://burmanativemuslim.blogspot.com/2013/01/blog-post_15.html. Picture Window theme. Powered by Blogger.